Author Topic: ကိုကိုထွန်းအေးတင်တဲ့ဟာသများ (Read 247987 times)
« Reply #130 on: May 16, 2011, 10:26:07 AM »
" သက်ရှိ ပထ၀ီ "
ဦးဘကြွားသည် သူရောက်ခဲ့ဖူးသမျှ နိုင်ငံတွေကို စီတန်း ရွတ်ပြနေသည် ။
" အများကြီးပေ့ါကွာ.. လန်ဒန်....ပါရီ...နယူးယောက်...ရောမ..ကရာချိ.........."
နားထောင်နေသူ တစ်ယောက်က ဖြတ်၍ ..
" ဒီအတိုင်းဆို ခင်ဗျားဟာ..ပထ၀ီနဲ့အတော် အကျွမ်းတ၀င် ရှိမဲ့ပုံပဲ..."
" ဟာ..အကျွမ်းတ၀င်ရှိပြီလား...ပထ၀ီမှာ...ငါ လေးငါးရက်လောက်တောင် နေခဲ့သေးတာပဲ "
" လက်တွေ့သမား "
လက်ထပ်မင်္ဂလာပွဲကြီး ပြီးသွားပြီ..၊ ဧည့်ပရိတ်သတ်တွေလည်း ပြန်သွားကြပြီ..။
အခုမှပင် တစ်ညတာ အိပ်စက်ရမည့် ဟိုတယ်ခန်းထဲမှာ နှစ်ယောက်ထဲ အေးအေး
ဆေးဆေး နေနိုင်တော့သည် ။
" မောင်ရေ...ကျမတို့ ဟာ နှစ်ယောက်သာဆိုတယ်...တကယ်တော့ တစ်ယောက်တည်း
" ဟုတ်တာပေါ့...ဒါပေမဲ့ မောင်က လက်တွေ့ ကျကျပဲ မြင်တတ်တယ်.. ညစာ မှာရင်တော့
နှစ်ယောက်စာ မှာမှ ဖြစ်မှာနော်...."
« Reply #131 on: May 16, 2011, 12:41:28 PM »
" မ ရီး "
မ်ိန်းမဆုံးပြီး မကြာခင်မှာပင် ကိုဘမောင်သည် သူ့ မိန်းမ၏ ညီမကို လက်ထပ်ယူလိုက်သည် ။ သူတို့ 
နေသည့် မြို့ လေးက ငယ်သဖြင့် လူတကာက ချက်ချင်းသိသွားပြီး ကဲ့ရဲ့ ဝေဖန်မည့်ဒဏ်မှ ရှောင်လွှဲ
လိုသည့် အတွက် ဆုံးသွားသည့် သူ့ ပထမ မိန်းမ ၏ ပုံတူပန်းချီကားကြီးကို ဧည့်ခန်းထဲတွင် ချိတ်
ဆွဲထားလိုက်သည် ။ တစ်နေ့ဧည့်သည် တစ်ယောက်က အလွန်လှပသည့် ပုံတူပန်းချီကားကြီးကို
ကြည့်ပြီး မေးသည် ။
" အဲ့ဒီ့ မိန်းမချောက ဘယ်သူလဲဗျ.."
ကိုဘမောင် မျက်ရည်လေး တစမ်းစမ်းနှင့် ပြန်ဖြေသည် ။
" အဲ့ဒါ..သိပ်ကို သနားစရာကောင်းတဲ့ ..ကျနော့် မရီး လေ..ဆုံးသွားတာ မကြာသေးဘူး.."
" ကိုယ့် ကို ကိုယ် မ မြင် သူ "
" ကဲ...ကိုယ်တို့လင်မယား ဖြစ်လာကြပြီ...ဒီတော့..မင်းရဲ့အားနည်းချက် အနည်းငယ်ကို
" ပြမနေပါနဲ့..ကျမသိပြီးပါပြီ.. .. အဲ့ဒီ အားနည်းချက် အနည်းငယ်ကပဲ....ရှင့်ထက်သာတဲ့
ယောင်္ကျားကို မယူဖြစ်အောင် ..တားမြစ်ခဲ့တာပေါ့ရှင်.."
« Reply #132 on: May 16, 2011, 12:54:43 PM »
" တတ် တာ ပြော ရ တာ ပဲ "
အော်ဇီ တစ်ယောက်သည် ရောမမြို့ ရှိ လမ်းဘေးကဖေးဆိုင်တွင် " ကက်ပါချီနို " သောက်နေခိုက်
မိန်းမပျိုလေးတစ်ယောက် သူ့ ဘေးမှာ လာထိုင်သည် ။ အော်ဇီ က မေးသည် ။
" မင်း..အင်္ဂလိပ်စကား တတ်သလား..."
" နည်းနည်းပါးပါး ပေါ့.."
" ဘယ်လောက် နည်းနည်းပါးပါး လဲ.."
" ဒေါ်လာ ငါးဆယ် "
" အဓမ္မ မို့ ပါ. "
" မေရီ...မင်း..ဒေးဗစ်ကို ချစ်တယ်လို့ပြောလိုက်ပြီပေါ့.."
" ဟဲ့...ငါက ပြောချင်လို့ မဟုတ်ဘူး...သူက အတင်း ပြောခိုင်းလို့"
« Reply #133 on: May 16, 2011, 01:16:17 PM »
" ကျေး ဇူး တင် လွန်း လို့"
အဘိုးအိုတစ်ယောက် ဆရာဝန်ထံ လာပြသည် ။
" ဆရာရယ်..အားတိုးဆေးလေးဘာလေး လုပ်စမ်းပါဦးဗျာ...အိုမင်းမစွမ်း ဖြစ်နေပြီလေ."
" ရပါတယ်..တစ်လုံးကို ဒေါ်လာ တစ်ရာ ကျမယ်.."
" ဘယ်လောက်ပဲ ကျကျ ဗျာ...အစွမ်းထက်ရင်ပြီးတာပဲ..."
ဆရာဝန်က ဆေးတစ်လုံး ထိုးပေးလိုက်သည် ။ နောက်နှစ်ရက်အကြာ..အဘိုးအို ပြန်လာသည် ။
" ဟဲ ဟဲ ကျေးဇူးပဲ ဆရာရေ..ဟဲ..ဟဲ. .နောက်တစ်လုံး လုပ်ပါဦး.."
ဆရာဝန်က နောက်ထပ် တစ်လုံး ထိုးပေးလိုက်သည် ။ အဘိုးအိုက ဒေါ်လာ နှစ်ရာ ထုတ်ပေးသည်။
" ဒေါ်လာ တစ်ရာပဲ ကျတယ်လေ.."
" သိပါတယ်..အပို ဒေါ်လာ တစ်ရာက ကျုပ်အဘွားကြီး ပေးခိုင်းလိုက်တာ..ယူလိုက်...ယူလိုက်.."
« Reply #134 on: May 16, 2011, 01:28:48 PM »
" တွေး လိုက် မိ တိုင်း လွမ်း...လွမ်း "
အသက် ၇၀ ကျော် အဘွား တစ်ယောက်သည် လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း လေးဆယ် လောက်တုန်းက
ယောင်္ကျားတစ်ယောက်နှင့် ဖောက်ပြန်ခဲ့ဘူးပါသည် ဟု ဘုန်းတော်ကြီးအား ဖွင့်ဟ၀န်ခံလိုက်သည် ။
ဘုန်းတော်ကြီး အလွန်အံ့အားသင့်သွားရ၏ ။ အခုမှ ဘာကြောင့် ၀န်ခံရသလဲ ဟု မေးလိုက်သည် ။
" အခု ပြန်တွေးကြည့်တော့ လွမ်းစရာလေးတွေ ဖြစ်နေလို့ ပါ ဖာသာရယ်..."
" မေမေ့ အလွမ်း.."
သမီးက သိပ္ပံပညာရပ်တွင် စိတ်ဝင်စားသဖြင့် အမေက သိပ္ပံဆရာကိုခေါ်၍ စာပြစေသည် ။ သင်ပြနေချိန်
တွင် သူကိုယ်တိုင်လည်း ၀င်ရောက်နားထောင်တတ်သည် ။ တစ်နေ့သမီးက...
" ဆရာ...လူတွေ ဘယ်လို ဖြစ်လာတာလဲ.." ဟု မေးလေသည် ။
" လိုအပ်တဲ့ ဒြပ်စင်တွေကို အတိအကျ တိုင်းတာပြီး အချိုးကျကျ ရောရတယ်..နောက် အပူပေးပြီး
မကြာခင် လူဖြစ်လာတာပဲ " ဟု ဆရာက ရှင်းပြသည် ။ သည်တော့ အမေက ၀င်၍.စိတ်မကောင်းသံဖြင့်
" ဆရာရယ်...ဆရာ့ပြောပုံအတိုင်းဆိုရင်..နည်းလမ်းဟောင်းကြီးကို လျစ်လျူ ရှုထားလိုက်ကြပြီပေါ့နော်.."
« Reply #135 on: May 16, 2011, 01:38:38 PM »
ပါမောက္ခ က ဆေးကျောင်သား ငါးယောက်ကို သင်ပြပေးနေသည် ။ သူက မိန်းမ တစ်ယောက်၏
ပုံကားချပ်ကို ပြလျှက် သူသိလိုသော ကိုယ်အင်္ဂါ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကို မေးသည် ။ ကျောင်းသား
များ စဉ်းစား၍ ရနိုင်ရန် သဲလွန်စလည်း ပေးလိုက်သည် ။
" အဲ့ဒီ့ ကိုယ်အင်္ဂါ အစိတ်အပိုင်းက ဆရာ့မှာလည်း မရှိဘူး..မင်းတို့ မှာလည်း မရှိဘူး..."
ထိုအခါ အထက်မြက်ဆုံး ကျောင်းသားတစ်ယောက်က ချက်ချင်းရပ်ကာ ဖြေလိုက်သည် ။
" ဦးနှောက် "
မိန်းမပျိုလေး နှစ်ယောက် စကားပြောနေကြသည် ။
" ချာလီက အိုင့်ကို ပြောတယ်..သူ့ ကို လက်ထပ်ပါတဲ့..နောက်ပြီး သူ့ ကို ဒီကမ္ဘာမှာ အပျော်ဆုံး
ယောင်္ကျားတစ်ယောက် ဖြစ်အောင် ဖန်တီးပေးပါတဲ့..သိလား..."
" ဒီတော့ ယူ..ဘယ်ဟာကို လုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်သလဲ..."
« Reply #136 on: May 16, 2011, 02:53:44 PM »
" မ ငြင်း နိုင် တဲ့ သူ့အ ကြောင်း ပြ ချက် "
အိပ်ထဲမှ ထွက်ကျသွားသော ရွှေဒင်္ဂါးပြား နှစ်ပြားကို " အက်ဂဘာ " ဘုရင်ကြီးက ကုန်းကောက်
ယူနေခိုက်..နောက်မှ ရောက်လာသူ ဗာဘယ် က ဘုရင်ကြီး တင်ပါးကို အသာလေး တစ်ချက်ပုတ်
လိုက်သည် ။ ဘုရင်ကြီး လန့် သွားကာ ကိုယ်ကို ရုတ်တရက် မတ်လိုက်သည် ။ ဗာဘယ် မှန်းသိ
လိုက်သည့်အခါ ဒေါသထွက်သွားသည် ။ သတ်စေ အမိန့်ထုတ်လိုက်၏ ။ သို့ သော် မကြာခင်
မှာပင် အမျက်ပြေသွားသည် ။ ထို့ ကြောင့် ..
" နောက်ကနေ တင်ပါးကို ပုတ်လိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး လက်ခံနိုင်တဲ့ အကြောင်းတစ်ခု ပြနိုင်ရင်..
သည်တော့ ဗာဘယ် က မဆိုင်းမတွပင်...
" အရှင်မင်းကြီး...အမှန်ကတော့ အရှင်မင်းကြီးမှန်း ကျွန်ုပ် မသိလို့ ပါ...ကျွန်ုပ်က ဘုရင်မကြီးလို့ ပဲ
« Reply #137 on: May 16, 2011, 03:08:52 PM »
" သူ့ရည် ရွယ် ချက် "
အရက်အလွန်အကျွံ သောက်ထားသည့် လူတစ်ယောက်သည် တနင်္ဂနွေတစ်နေ့ တွင် ဘုရားကျောင်းသို့ 
ရောက်လာသည် ။ သူ့ ကို ဘုန်းတော်ကြီးက မြင်သွားရာ ..
" အရက်သောက်ပြီး ဘုရားကျောင်းကို လာတာ ဘယ်လို အပြစ်မျိုး ဖြစ်တယ်ဆိုတာ မင်း မသိဘူးလား.."
" သိပါတယ်..ဖာသာ..ကျနော်က ဘုရားကျောင်းတက်ဖို့လာတာမဟုတ်ပါဘူး..အာပတ်ဖြေဘို့လာတာပါ "
" နား လည် မှု လွဲ ခြင်း "
အမျိုးသမီး တစ်ယောက်သည် စာအုပ်ဆိုင်ထဲ`၌ လျှောက်ကြည့်ရင်း တစ်နေရာတွင် သူမ ကြိုက်သည့်
စာအုပ်တစ်အုပ်ကို တွေ့ လိုက်သည် ။ စာအုပ်ကို ယူလာပြီး ကောင်တာပေါ်သို့ချလိုက်သည့် အခါ စာ
အုပ်အနှောင့်တွင် အနည်းငယ် ပေရေနေသည်ကို သတိပြုမိလိုက်သည် ။ ထို့ ကြောင့် ပြန်လဲလိုသော
" အဲ့ဒီစာအုပ်က နည်းနည်း ညစ်ပတ်တယ် ထင်တယ်နော်..." ဟု ပြောလိုက်ရာ..အရောင်းစာရေးက
" မသိပါဘူး အစ်မရယ်..ကျနော့်မှာ အဲ့ဒီစာအုပ်ကို ဖတ်ကြည့်ဖို့အချိန် မရပါဘူး.." ဟု ငြီးငြူသံဖြင့်
« Reply #138 on: May 16, 2011, 03:26:15 PM »
" စံ ပြ စာ စီ စာ ကုံး "
ဖခင်ဖြစ်သူက သားဖြစ်သူ စာမေးပွဲ ဖြေရာတွင် အထောက်အပံ့ ဖြစ်အောင် ကျွန်ုပ် အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်း
ခေါင်းစဉ်ဖြင့် စာစီစာကုံး တစ်ပုဒ် နမူနာ ရေးပေးသည် ။
" တစ်ခြား ခေါင်းစဉ်ပါလာရင်လည်း အခု ဖေဖေ ရေးပေးတဲ့ အထဲက သုံးလို့ ရတဲ့ ၀ါကျတွေ ယူသုံးလို့ ရတယ်
သားရဲ့"
ကံဆိုးချင်တော့..မေးခွန်းမှာ ပါသည့် စာစီစာကုံး ခေါင်းစဉ်က ကျွန်ုပ်၏ အဖေ ဖြစ်နေသည် ။ မည်သို့ ပင်
ဖြစ်စေ သားတော်မောင်က ယူသုံးလို့ ရမည် ထင်သည့် ၀ါကျများကို ထုတ်ယူ သုံးစွဲလိုက်လေသည်။ သို့ ဖြင့်
သူရေးလိုက်သော ကျွန်ုပ်၏ အဖေ စာစီစာကုံးမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သွားလေတော့သည် ။
" ကျွန်ုပ် ၏ အဖေ "
" ..ကျွနု်ပ်တွင် အဖေပေါင်း များစွာ ရှိသည် ။ ဦးဘမောင်သည် ကျွန်ုပ် အချစ်ဆုံး အဖေ ဖြစ်သည်။
သူသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အိမ်နားတွင် နေထိုင်သည် ။ သူသည် ကျွန်ုပ်တို့ ထံ ညနေတိုင်း လာလည်သည် ။
ကျွန်ုပ် အမေကလည်း သူ့ အား အလွန် ချစ်သည် ။ သူသည် လိုအပ်ချိန်`၌ အကူအညီအမြဲပေးသည့် အဖေ
အစစ် တကယ်ပင် ဖြစ်ပါတော့သည် ။ "
« Reply #139 on: May 18, 2011, 09:57:59 AM »
" လူ ထု ဆက် ဆံ ရေး "
တစ်ခါက United လေကြောင်းလိုင်းမှ လေယာဉ်တစ်စီး နယူးယောက်လေဆိပ်မှ ခရီးစဉ်ကို
ဖျက်သိမ်းလိုက်ရသည် ။ ဖျက်သိမ်းသောခရီးစဉ်မှ ခရီးသည်များအား နောက်လေယာဉ်တစ်
စီးဖြင့် ပြန်လည်ချိတ်ဆက်ပေးရန် ကောင်တာတွင် အမှုထမ်းအမျိုးသမီး တစ်ဦးတည်း လုပ်
ဆောင်နေရရာ ခရီးသည်များ တန်းစီနေရသည် ။ ထိုအချိန်မှာပင် ဒေါသထွက်နေသည့် အမျိုး
သား တစ်ဦး ကောင်တာရှေ့ရောက်လာပြီး....
" ငါ ဒီလေယာဉ်နဲ့လိုက်ရမှဖြစ်မယ်...ပထမတန်းက စီစဉ်ပေးရမယ်.." ဟု ပြောသည် ။
အမှုထမ်း အမျိုးသမီးက ..
" ဟုတ်ကဲ့ ..လူကြီးမင်းကို ကူညီပါ့မယ်ရှင်..ဒါပေမဲ့ ရှေ့ ကလူတွေကို အရင် ကူညီ ရပါလိမ့်မယ်
ရှင့် အလှည့်လဲ ရောက်လာပါလိမ့်မယ်.." ဟု ပြန်ဖြေရာ..အမျိးသားက အလျှော့မပေးပဲ..
" မင်း..ငါဘယ်သူလဲ ဆိုတာ သိသလား.." ခပ်ကျယ်ကျယ်ပြောလိုက်သည် ။
အမျိုးသမီးကလည်း အပြုံးမပျက်ပင် လူထုကြေငြာချက် မိုက်ကရိုဖုန်းဖွင့်၍
" ကျေးဇူးပြု၍ နားဆင်ပါရှင်..ကောင်တာရှေ့ မှာ လူကြီးမင်းတစ်ယောက် သူ့ ကိုယ်သူ ဘယ်သူမှန်း
မသိဘူး ဖြစ်နေပါတယ်...သူဘယ်သူလဲ ဆိုတာ ကူညီပေးလိုက်ကြပါရှင်..." ဟု ပြောလိုက်သည် ။
အမျိုးသားလည်း ဒေါသပုန်ထသွားပြီး F...စကားလုံးဖြင့် ဆဲရေးတိုင်းထွာလိုက်သည် ။ အမျိုး
သမီး က တစ်ချက်လေး တွန့် မသွားဘဲ....
" စိတ်မရှိပါနဲ့ ရှင်...အဲ့ဒီအတွက်လည်း လူကြီးမင်း တန်းစီ စောင့်ဆိုင်းရပါလိမ့်မယ်.." ဟု ဆိုလိုက်ရာ
လူအုပ်ကြီးက လက်ခုပ်လက်ဝါးတီးပြီး ထောက်ခံကြပါတော့သည် ။